मङ्गलबार, जनवरी 11, 2011 शनिबार, अक्टोबर 18, 2014 Douglas Karr
टेक्नोलोजी मार्केटिंग, मार्केटिंग टेक्नोलोजीको विपरित, तरीका यो हो कि प्रविधि र उत्पादनहरू सम्भावित ग्राहकहरूमा राखिन्छन्। हाम्रो विश्व र जीवन अनलाइन गइरहेकाले ... जुन तरीकामा टेक्नोलोजीहरू शानदार छन्, कसरी ब्रान्ड र समग्र बजार गर्नेको उदाहरणहरू।
एप्पलसँग कुरा नगरी टेक्नोलोजी मार्केटिंगको बारेमा सोच्न गाह्रो छ। तिनीहरू शानदार मार्केटरहरू हुन् र आफुलाई धेरै प्रतिस्पर्धाको साथ भीड बजारमा आफूलाई स्थान दिन अझ राम्रो काम गर्छन् ... र तिनीहरूले बजार साझेदारी र नाफा प्राप्त गर्न जारी राख्छन्। कोरको एप्पलको मार्केटिंग लागत र सुविधाहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन ... बरु दर्शकहरूमा केन्द्रित भई।
जब म एप्पल मार्केटिंग अभियान देख्छु, म विश्वास गर्दछु कि प्रत्येक केही अवधारणामा बिग्रिएको छ:
शुद्धता - धेरै अक्सर, प्रत्येक अभियानको एक लक्षित सन्देश र श्रोता हुन्छ ... अधिक कहिले हुँदैन। इमेजरी सरल छ, जस्तो सन्देश हो। यो एप्पलको लागि केवल सामान्य सेतो वा कालो पृष्ठभूमि हुनु सामान्य हो… ताकि तपाईं आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ तिनीहरू चाहानुहुन्छ।
विशेषाधिकार - एप्पल एक प्रीमियम ब्रान्ड हो जुन दुबै सुरुचिपूर्ण र सुन्दर उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ। तिनीहरूले तिमीलाई बनाउँछन् चाहनुहुन्छ गुटको भाग हुन। कुनै पनि एप्पल प्रयोगकर्तासँग कुरा गर्नुहोस् र तिनीहरू सर्ने दिन साझेदारी गर्दछन् र तिनीहरू कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्दैनन्।
सम्भावित - एप्पल पनि आफ्नो लक्षित दर्शकहरु को मानस मा ट्याप को एक ठूलो काम गर्दछ। जब तपाइँ एक एप्पल अभियान देख्नुहुन्छ, तपाइँ कल्पना गर्न थाल्नुहुन्छ कि तपाइँ तिनीहरूको उत्पादनको साथ के सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ को लागी भर्खरको विज्ञापन छ आई लाइफ (जुन मैले हालसालै किनेको):
यो शक्तिशाली विज्ञापन हो ... समस्यामा केन्द्रित गर्नुको सट्टा, स्थिति (जुन एप्पलले म्याक बनाम पीसी विज्ञापनले गर्‍यो), वा सुविधाहरू, एप्पलले दर्शकहरूलाई केन्द्रित गर्दछ। कसले केही गृह चलचित्रहरूको भिडियोहरू सिर्जना गर्न र उनीहरूलाई हलिवुड शैलीका क्लिपहरूमा परिवर्तन गर्न चाहँदैन?
कहिलेकाँही कम्पनीहरूले यसमा ट्याप गर्छन् ग्राहक प्रशंसापत्रको प्रयोगको माध्यमबाट ... तर एप्पलले पनि त्यसलाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ। तिनीहरूले केवल बीज रोप्दछ ... र श्रोताको कल्पनालाई बाँकी गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईको कम्पनी, उत्पादन वा सेवामा कस्तो भावना आयो? ती भावनाहरूमा ट्याप गर्न तपाईं कसरी आफ्नो मार्केटिंग स्थिति अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ?
टैग: स्याउ मार्केटिंगस्याउ मार्केटिंग सूत्रबजार सूत्रसम्भावनाविशेषाधिकारशुद्धता
जनवरी 12, 2011 मा 12: 46 एएम
मैले यो समस्या टेक्नोलोजीमा मात्र नभई धेरै व्यवसायहरूमा फेला पार्छु। आज व्यवसाय मालिकहरूले गरेको धेरै मार्केटिङलाई अझै पनि व्यवसायहरूले सही बजारमा पुग्ने आशामा व्यापक सन्देश पठाउने माछा मार्ने जालको रूपमा सोचेको छ। उदाहरण को लागी, म हाल एक विद्यार्थी अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स संग काम गर्दैछु जुन सबै कलेज विद्यार्थीहरु लाई मात्र बजार को लागी प्रयोग गर्दछ तर केहि बजार अनुसन्धान गर्दा हामीले पत्ता लगायौं कि 80% भन्दा बढी बासिन्दा जुनियर थिए जो हालसालै गरीब ग्राहक सेवा को कारण अन्य अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स बाहिर गएका थिए। उच्च ताप लागत। हामीले मार्केटिङ सन्देश र मेडियनलाई त्यो बजारलाई लक्षित गर्न पुन: विकास गर्न सक्षम भयौं। मैले अन्य उद्योगहरूमा पनि यो धेरै देखेको छु। महान ब्लग।
जनवरी 13, 2011 मा 5: 13 एएम
डग - तपाईंले अन्ततः मलाई लेख्नको लागि एउटा ब्लग पोस्ट लेख्नको लागि लात दिनुभएको हुन सक्छ।